Websaydhyada SVG Sawirka Ugu Fiican | Abuurista khadka tooska ah
Manuel Ramirez | | Dhiirrigelinta, Kaararka kartoonka
ka Sawirada SVG ayaa soo buuxinaya shabakadaha shabakadaha si sanado gudahood, aan ugu raaxeysan karno khibrad websaydh ka wanaagsan guud ahaan. Waana sawirrada noocan ah, marka laga reebo in la ballaadhin karo iyada oo aan luminayn wax tayo ah oo qeexidda ah, inta badan waa ku dhowaad kilobyte oo xog ah.
SVG waa qaab ah Sawirka dulinka ku saleysan XML ee sawirada 2D. Noocaan qaabdhismeedka garaafka ah waxaa loo isticmaali karaa dhammaan noocyada saameynta, sawirrada, animation iyo isdhexgalka si loo siiyo adeegsi ballaaran websaydhada ay ku dhex jirto Maaddaama culeyskeedu yar yahay, waxay kuu oggolaaneysaa inaad ku ciyaarto noocyadan ficillada ah, markaa waxaan tusineynaa websaydhyada ugu wanaagsan ee leh sawirada SVG si ay ugu adeegaan dhiirrigelin ama tusaale cad oo ah sida loo sameeyo kan xiga ee aan u soconno u samee macmiil ama shaqo.
1 Wakaalada Socodka Ragga
2 Lacagaha caanka ah
6 Copper & Geesi
10 Dhismaha Dhismaha Paris
11 Mashruuca Redspace
12 Filimada Tabo Tabo
19 Tijaabooyinka caymiska
20 Gobolka Tech Tech
22 Raaxada Buffy
23 Sidoo kale Mleko
Wakaalada Socodka Ragga
Hay'ad naqshadeynta dhijitaalka ah oo isku kalsoon iyada oo leh degel websaydh leh oo loogu talagalay isticmaalka sawirrada SVG iyo taabasho aad u qaas ah oo muuqaal ah. Mid lagu waxyoodo shaki la'aan. Tilmaamuhu wuxuu isu beddelay dhibic guduudan waa soo jiidasho, taas oo la jaanqaadaysa mid kasta oo ka mid ah walxaha ka kooban shabakadda.
Lacagaha caanka ah
Websaydh leh naqshad aad u fiican oo ay ishtags ku leedahay muuqan sida "pop up" iyo in aan marna laga gaabin aragtida iyo waaya-aragnimada ay soo bandhigto boggan. Hashtagyada qaarkood ee "la cuno" sawirrada laftooda ee loo gudbin karo xagga hore.
Iyadoo sababta ugu weyn ay tahay fiidiyowga, waa xiiso leh sida loo mideeyo sawirada PNG iyadoo qoraalka la soo bandhigayo markaan hoos u sii soconno.
Degel lagu dhiirrigelinayo fikirkaaga weyn animations qaar ka mid ah taas oo si habsami leh u socota markaan ku sii socono waxyaabaha ay ka kooban yihiin. Hormarka weyn ee naqshadeynta websaydhka ee aan maanta wajahayno waa mid muhiim ah, waana 10 × 17, iyada oo ujeedadu tahay in la muujiyo 26 farshaxan oo ka kooban albumyada muusikada ay jecel yihiin ee 2017, midka muujiya.
Si fudud u riix astaanta saddexda garaac ee jiifka ah midigta sare ilaa soo hel animations jilicsan oo jilicsan oo muujinaya menu madaxa boggan. Tusaalaha ugu dambeeya ee sida animations-ka ay tahay in loogu xaqiijiyo goobta.
Copper & Geesi
Dukaan internetka ah faan la’aan badan animations-ka, laakiin taasi waxay u adeegtaa tusaale kale oo wax looga qabanayo sawirrada SVG.
Laga soo bilaabo Spain waxaan leenahay Rocka si aan u tusno kala-guur midab weyn taas ayaa la sameeyaa markaan ku sahminno jiirka jiirka mawduucan boggan. Khibrad qurux badan oo leh noocyo kala duwan oo animations ah.
Naqshadeynta websaydhka kaas oo waxay raadineysaa fudeyd ka mid ah cunsurradeeda adeegsi weyn gebi ahaanba, iyada oo aan la seegin iota xariifnimo qaar ka mid ah animations-ka lagu muujiyey waayo-aragnimadan websaydhka weyn ee ay Paradiso bixiso. Waxaan mar kale xoojineynaa waxa menu-gaaga madax-abuurka leh ee hal abuurka ku dhammaaday animation.
Istuudiyaha hal abuurnimo oo ku saleysan New York oo muujinaya ujeeddooyinka oo dhan oo leh menu cinwaanka dhinaceeda oo horteenna ka furaya oo leh animations taxane ah iyo sawirro aad u soo jiidasho leh. Haddii aad raadineyso menu gaar ah oo loogu talagalay websaydhkaaga, waxaad horeyba kuugu dhiirrigelin kartaa Zero's. Markaad u dhaqaaqdo tilmaamaha jiirka mid kasta oo ka mid ah xulashooyinkeeda, sawirradan midabada leh iyo animations-ka ayaa soo muuqan doona.
Dhismaha Dhismaha Paris
Cajiib ah shaashadeeda soo dejinta iyo qaabkaas sharafta leh muuji farriimihii ugu dambeeyay, qoraallada Facebook ama sawirro ku yaal Instagram. Websaydh sharafaya tijaabada webka.
Mashruuc fikraddiisu tahay isku socodka xilliyada megacities-ka Shiinaha iyo in lagu tababaro xirfad weyn oo lagu muujiyo isla tan iyada oo ay ugu mahadcelinayaan waxyaabihii ay ka baxeen iyo garaadkooda garaadka leh isticmaalka nidaamka midabka. Sawirro waaweyn oo muuqda oo baaba'a animations tayo sare leh iyo farsamo yaqaan. Waa xaasid.
Filimada Tabo Tabo
Shirkad Faransiis ah oo soo saarta taxane telefishan oo tusaysa a awood weyn oo fiidiyoow ah adigoo isla markiiba beddelaya adoo hoos u dhigaya tilmaamaha jiirka mid kasta oo ka mid ah qaybaha. Fur mid kasta oo iyaga ka mid ah si aad u ogaato waxa ay u eg tahay tijaabinta qaabeynta websaydhka.
Websaydhkani wuxuu adeegsadaa laba midab oo waaweyn si abuuri kaliya farqiga saxda ah in la is aqoonsado. Waxay sidoo kale u taagan tahay animation-kaas asalka ah ee dhaqdhaqaaqa ku jira wakhti kasta.
Zen Studio wuxuu noo keenayaa websaydhkan a fannaanka laga aqoonsan yahay adduunka oo dhan taasina waa tusaalaha ugu badan ee waxa uu web noqon karo: video clip oo is dhexgal ah oo tilmaamkeenu yahay kan xukuma animation-ka gaarka ah. Muhiim ah.
Shirkad la-talin oo fadhigeedu yahay Brazil oo adeegsata animations sida daahyada si aad u muujiso mid kasta oo ka mid ah adeegyadaada. Si fudud, laakiin wax ku ool u ah adeegsiga midabada cagaaran iyo buluugga ah ee loogu talagalay sooyaal madhan.
Khibrad kale oo muuqaal ah oo ku saleysan jaalle iyo madow, taasina waxay leedahay saameyn weyn oo muujinaysa aafooyinka.
Faahfaahinta hore ee muujinaysa a taxanaha xirfadaha webka taasi cidna dan uma aha.
Booska wada shaqeynta oo leh a bartilmaameedka loo dhigay midabka cagaaran. Noocyo indha-indheyn dheeri ah oo indha-indheyn ah oo loogu talagalay qaab-dhismeed muuqda oo qaadaya marxaladda dhexe iyada oo loo marayo isticmaalka dhaqdhaqaaqaas siman ee saxda ah. Baadhitaanka astaanta muuqaalka ayaa lagula talinayaa.
Shabakad raaxo iyo daryeel la'aan ma raadinayo wax ka badan wixii la yiri.
Gobolka Tech Tech
Haddii aad rabto degel websaydhada leh taas oo ka dhex muuqata inta kale, si fiican u eeg midkan halka ay ku tijaabinayaan hab aad u wanaagsan oo lagu fahmayo meelahaas, dareenkooda iyo dhaqdhaqaaqyadooda.
Hay'ad dijitaal ah oo muujinaysa qiimo weyn naqshadeynta websaydhka adiga oo ku kaxeynaya animation qosol badan oo la arki karo markaad ka gudubto tilmaamaha jiirka dushiisa "K".
Websaydh kale oo caadi ah oo xoogga saaraya a nooc ka mid ah kolajka taasi way inagu furaysaa intaan hoos u sii soconno.
Sidoo kale Mleko
Summad caan ah oo Slovak ah oo caano isticmaasha sahaminta iyada oo loo marayo wareejinta si loo muujiyo khibrad websaydh mudan oo soo jiidasho leh. Xiiso badan ugu yaraan.
Herokid Studio, mid Isbaanish ah, ayaa noo keenaya naqshada degelkan waxay u taagan tahay madow, jaalle iyo fiidiyowyo taxane ah Waxay ku muujinayaan xarrago weyn khibradda timaha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Kaararka kartoonka » Websaydhyada ugu fiican ee ku saleysan sawirrada SVG
Markab 21 dijo
Daraasadda nave21.com waxaan ku sharraxnay SVG sida ikhtiyaarka ugu fiican muddo dheer. Waxaan jecelnahay! iyo macaamiisha sidoo kale.
Xayeysiinta Ovisoft waa duullaan mana kuu oggolaaneyso inaad si sax ah u daawato qodobkaan. Aad u xun, waa maqaal wanaagsan oo macluumaad wanaagsan wata.
Ku jawaab Guillermo Zamarripa
Waad ka furi kartaa xiriiriyeyaasha oo aad naftaada kala kulmi kartaa: =)
Lynn Choi's sawirada lamaanaha jacaylka dhiirigelinta leh